‘बा’ – Waikhari
गृहपृष्ठ खबर ‘बा’
आज बिहान नै त थियो .. बा संग सिंलिण्डर भर्न संगै हिडेको थिएँ तर “ ह्याप्पी फादर्स डे “ बोल्न सकिन .. किनकी मेरो घाँटी दबिएको थियो ! मेरो मुखमा ताल्चा लगाईएको थियो ! जब तपाईको पछी पछी म हिडेँ मेरो हात खुट्टा थरथराईरहेको थियो ! काँपीरहेको थियो .. जस्तो कि भुकम्पको धक्काले थर्काईएको जमिन जस्तै ! उसै पनि बा संग धेरै बोल्ने हिम्मत त छैन म संग फेसबुकमा एक्टिभ हुनुहुदैन त्यसैले लेख्न बाध्य हुन्छु “ ह्याप्पी फादर्स डे “ !
संगै सिलिण्डर लिन जाँदा एउटा फोटो सम्म खिच्ने आँट भएन ! ग्यालरी पल्टाउँदै गर्दा एउटा कुनै संयोग मिल्दा खिचेको फोटो भेटाएँ अनि त्यहि फोटो पोस्ट गर्दै स्टाटस् पनि लेखिदिएँ ! “ लभ यू ड्याड “ सहित ! आज सम्म आमा संग हरेक कुराहरुको माग गरियो .. त्यो सुन्दाबेर तपाई चुपचाप बजार छिरेर पुरा गर्दिनुभयो ! यो थाहा छ कि ईच्छाईएको चिज पुरा हुन्छ तर यो चिज चाहियो भनेर सिधै भन्ने आँट चैँ गरिएन ! यो पनि होईन कि नाईनीस्ती गर्नुहुन्न ! कहिल्यै कुनै कुरामा हात पनि उठाउनुहुन्न र पनि थाहा छैन यो डर कस्तो ?
तपाईले कहिल्यै कुनै पनि चिजको लागी मनाही गर्नुभएन ! न त कुनै कुरामा राकतोक गर्नुभयो ! हो यहि तपाईको बिस्वासले नै हामीमा गलत गर्नुपर्छ भन्ने धारणा न्युन रह्यो ! यस्तो होईन कि कहिल्यै गलत काम गरिएन तर गरेको भए पनि ढाकछोप गरेर बसियो तर त्यस्लाई आदत बनाईएन ! तपाईको प्रेम कहिल्यै नम्बरको प्रेमी भएन !
याद छ .. जब तपाई काम सकेर राती घर आउनुहुन्छ .. एक किसीमको डरले कतै कुनो छोपेर लुकिरहेको हुन्छु ! र कहिलेकाँही डरले सुतेको नाटक पनि गरेको हुन्छु ! र तपाईले सोँध्नुहुन्थ्यो आमालाई “ छोरोले खाना खायो ? “ अनि छाती फुलिन्थ्यो तर सरिर चिसो हुन्थ्यो ! तपाई आउदा तपाईको झोलामा आफ्नो लायक सामान खोज्नु त मेरो दिनचर्या नै थियो तर मनबाट नै .. झोलामा हात हाल्ने मेरो आँट थिएन ! हात नहाले पनि आफ्नो सामान पाउनु .. ओह ! सम्झिएरै मुस्कुराईदिन्छु ! कहिलेकाहीँ बाहिर खाना खाएर आउदा “पाको गास “ जबर्जस्ती खानु पर्ने बाध्यता !
धेरै कहानी लेखेँ .. सबै प्रेम कहानी भए ! सबै कहानीमा केटी .. प्रेमीका .. अन्य अन्य ! तर आजसम्म तपाईलाई एउटा पनि पढेर सुनाउने हिम्मत भएन ! न त पढ्नुहोस् भनेर थमाएँ ! लाज र डर दुबै कुराले पेल्दो रहेछ !
लेख्न त धेरै मन थियो .. तर यहाँ धेरै लेख्दा पनि “ फादर्स डे को स्वांग पारेको “ आरोपी बन्न सक्छु ! किनकी तपाईले कहिल्लै म माथीको कुनै पनि कुराको अपजस् सहन सक्नुहुन्न ! दुनिँयामा हर छोरामान्छेको भगवान् “ बा “ नै हुन्छन् ! जिम्मेवारी सिकाउने तरिका कोहि तपाईबाटै सिकोस् ! डर देखाउनु कोहि बा बाटै सिकोस् ! किनकी हरेक मार्गदर्सन् मा कुनै पनि तिखो प्रतिकृया होस् या सरल हरेक कुराको ज्ञान् भएका बा नै हुन् ! कुन कुरामा कस्तो व्यबहार गर्नुपर्छ त्यो सबै ज्ञान भएका बा नै हुन् !
र मलाई बचपन देखि धेरै चाहाना हुन्थ्यो .. यो बुनुँ त्यो बनुँ .. तर अहिले लाग्छ म बा जस्तै बनुँ ! ब्यबहारीक .. सहनसिल .. मेहनती ! हो म त्यस्तै बन्नु छ .. तपाईको हरेक कुराको भार उठाउनु मन छ !